Ka faa'iideysiga twitter: Dhiirrigeliso - Geofumadas
Muujinta twitter: Soo Dhawow
Oktoobar, 2010 Internet iyo Blogs, egeomates My
Haddii ina-adeerkaygu isticmaalo twitter, xadhigga codka ee xaaska (QDDG) ayaa lahaa nolol ka fiican.
Waxyaabo badan ayaa isbadalay qaabka loo xayaysiiyo waxyaalaha cusub. Nolosha 35 sano kahor waxay ahayd mid fudud, kadib maalintii labaad ee fasalada -maxaa yeelay waxay ahaayeen laba- Waxba lagama maarmaanka u ah, mana aha hawlaha, imtixaannada, ama umeerinta waalidka -taas oo aan iska indha tirin sida maanta-. Ina-adeerkayaga Wil, si aan macquul aheyn ayuu uga bixi lahaa gurigiisa ilaa bangiyada dooxada si uu galabta ugu hoydo barxadeena, ciyaar duug ah oo saynis badan uusan u baahneyn inuu ku tuuro miraha cashew god. Tamarindka cagaaran hoostiisa, saacadihii ayaa soo maray iyadoon wax ka dhicin barxaddaas boodhka ah. Ku alla kii ku riday abuurka badan, kasbaday badan.
Waxay ahayd dhamaanba saaxiibkayagu inuu soo ururiyo faa'iidadiisa, boodhka caloosha ka rux badna caloosha oo iska tuur isaga oo ka hor Adeer Leda Waxaan doonayaa inaan sheego labaadkiisa Wiiiiilllll !!! in horeyba caymis bulsheed loogu soo daray ciqaab.
Lix sano ka hor, emaylku wuxuu ahaa dariiqa lagu ogeysiiyo inaad ku guuleysatay abaalmarin Be Be Awards. Qof walba waan sugeynay in Juan, iyada oo rasmiga ah ee rasmiga ah uu ka digay in aan aad u dhowahay, in aan ahaa finalisto, inaanaan riyoon ahayn, laakiin ma aanan rajo dhigin, in aan ku guuleysanay.
Hadda, in 2010 la soo riixo, waxyaabaha alaabtu keento waa kuwo la mid ah, oo caadi ah, inkasta oo aanay ahayn dhammaantood:
Nuqul dib loo soo celiyay "Sannadka ku-meel-gaadhka ah"Taasi waxay ku jiri doontaa buugtayda qiyaas ahaan 10 sano,
A qalin ganaax leh ciriiriga silcin, kaas oo tagi doona ururinta gabadhayda sanadaha 5, inta ay noqonayso dhalinyaro oo waxaad u dirtaa buuryaqabyada duurka,
Una pintosa buug adag oo aan kaa dhigi doonin inaad xoqdo, waxaan jeclaan lahaa inaan ka badbaadiyo aruurinta, laakiin wiilkaygu hubaal wuu jebin doonaa hal toddobaad sawirada cajiibka ah,
Wargeyska oo leh barnaamijka dhacdada ee lagu tuuray saddex maalmood.
Iyo wargeys ku qoran warqadda:
Raac nala soo xidhiidh
Haa mudane, shabakadaha bulshada ayaa u yimid inay bedelaan habka aan u wada xiriirno. Sidii habaryartay qaylo-dhaan naxdin leh markay wacday Wilfredo, salaanta cordial of Jeff Thurston kuwaas oo ku dhawaaqay Vector1 ayaa laga dhawaajiyey ka hor dhacdada. Wakiilka baraha bulshada, -sida ay ugu yeeraan tan- Waxay la mid noqon doontaa waxa joornaalada martida ay sameeyaan, qaarna leh sannado badan oo muhiimad leh, taageerayaal kale oo nafsadeena dhex dhigay. Qosol kasta iyo ilmo kasta oo ka timaadda walaalaha Bentley, ka kafaala qaadayaasha, kuwa ku guuleysta iyo xitaa gelitaankani wuxuu ka dhawaaqi doonaa twitter.
Illaa iyo iminka waxaan u imid inaan fahmo nus ka mid ah qaabka ganacsiga ee Facebook, iyo in ka badan ama ka yar waxaan qiyaasayaa halka ay ku socoto internetkeeda dadka. Weli waxaa igu adkaatay inaan calaliyo caqliga ganacsi ee quudinta digaagga nacasnimada ah. Laakiin fahamka twitter-ka waxay umuuqataa mid aad u dhib badan, waxaan dheefsaneynaa markaan aragno inay halkaan ka shaqeyneyso, in kastoo caqliga saliimka ah uusan qofna qiyaasi karin halka adeega uu aadi doono in waxa ay qabato oo dhan ay tahay:
Waa waxa kaliya ee eedeymaheenu sameeyeen, qaylinaya, taas oo ka duwaneyd tan markii aan ku doodnay sababtoo ah walaalkay waligiis ayuu sameeyey -iyo waqti isku mid ah- khiyaamo. Laakiin way shaqeysay, si la mid ahna waxay ku dhacdaa Twitter, maxaa yeelay sayniska kuma jiro shimbiraha buluugga ah ee yaabka leh, laakiin waa awoodda kan soo furayaa uu leeyahay. Marka Dell, Bentley, CNN, Univision iyo shirkado kale oo waawayn ay shimbir cirka gashadaan cagta, waxaan fahannay waxa ay ka dhigan tahay adeegan microblogging macnihiisu yahay, kaas oo u yimid in si aad ah looga faa'iideysto astaamaha @ iyo lambar #.
Waa wax iska caadi ah hadda, in dadka caanka ah ee dhexdhexaadiyahan bulshada lagu xuso @ kahor. In kastoo aqlabiyad weyn, twits! Waxay yihiin digniino aan faa'iido lahayn oo ka yimid telefoonnada gacanta, oo leh chambres muran, autospam iyo dadka buuq ku abuuraya gaas kasta oo ay sii daayaan. Kaliya maahan twitter laakiin kuwa badan oo u soo baxay inay yihiin wax laga xumaado Buz ee Google !. Laakiin xariifnimada abuure twitter-ka ayaa sii ahaan doonta taas: dareenka guud ee nolosha ayaa lagu dabaqay qaab gaaban oo qaadi kara ilaa 140 xaraf. A twit fudud! taas oo isu rogta qaylo marka isticmaale leh 50,000 oo raacsan uu sameeyo.
Tani waa nolosha, isbeddelka, naxdinta laga bilaabo bilowga kuwa annaga oo hal maalin u adeegsada AutoCAD 11 on 286, oo leh asal madow iyo waraaqo liin dhaan ah. Laakiin taasi waa sida isbeddelladani u yihiin, aan la saadaalin karin bilowga oo la saadaalin karo dhamaadka, maaddaama mid ka mid ah qoraalkan uu noqon doono:
Halkan waxaad noogu raaci kartaa twitter-ka.
Post Previous" Hore Amsterdam oo dheeraad ah
Post Next Bentley wuxuu doonayaa inuu dgn u noqdo mid caan ahNext »
Khariidaynta heerka badda waxay la kacday Sentinel-6
Doorka suurtagalka ah ee GIS ee qaybinta tallaalka COVID-19
Matalaadda dhulka ee gargaarka hadhka leh
Soosaarida dhismaha otomaatig ah LOD2